I-twitch manje ivumela abasebenzisi be-iphone ukuthi babhalisele ama-streamer abo abathandayo
none Izindaba Nokubuyekezwa I-Twitch manje ivumela abasebenzisi be-iPhone ukuthi babhalisele ukusakazwa kwabo okuthandayo
I-Twitch manje ivumela abasebenzisi be-iPhone ukuthi babhalisele ukusakazwa kwabo okuthandayo
Uma & # 8216; umsebenzisi we-Amazon Prime obhalisile kanye nomdlali we-gamer ngasikhathi sinye, indlela elula yokusekela iTwitch streamer yakho oyithandayo ukubhalisela isiteshi sakhe neTwitch Prime. Ukuba ne-Amazon Prime kukuvumela ukuthi ubhalisele isiteshi seTwitch mahhala inyanga ngayinye inqobo nje uma ukhokhela i-Amazon ukubhalisa kwakho.
Kodwa-ke, ungakwenza lokho kusuka kudeskithophu yakho kuze kube muva nje lapho iTwitch ithathe isinqumo sokwengeza amandla okubhalisela isiteshi usebenzisa i-iPhone. Okubhaliselwe ku-iOS kusebenza okuhlukile kunokwideskithophu, ngakho-ke nakhu okufanele ukwenze ukuze ukwazi ukwenza lokho.
Okokuqala, kufanele uthenge okuthiwa yi-iOS Sub Tokens ngohlelo lokusebenza lweTwitch. Ithokheni ngalinye lingahlengwa ngokubhaliselwe kwenyanga eyodwa kwe-Tier 1. Futhi, uzokwazi ukunweba okubhalisile ngokuhlenga amathokheni amaningi (angafika kwangu-12 ngasikhathi sinye) noma ngokuthenga amathokheni amaningi ongawasebenzisa kamuva.
Ukudikiza futhi ibalula ukuthi lawa maSub Tokens angahlengwa kunoma yisiphi isiteshi esiXhumene noma sozakwethu esihlinzeka ngokubhaliselwe kwe-Tier 1, futhi banikeza izinzuzo ezifanayo ngokungathi ubhalise kudeskithophu, kufaka phakathi amabheji, ama-emotes wababhalisile, ukubuka okungenazikhangiso, nengxoxo engaphansi kuphela.
Futhi kufanele uqaphele ukuthi yonke i-Twitch streamer ikhokhelwa isabelo sokubhaliselwe kwe-iOS, njengoba nje yenza ngokubhaliselwe okuthengwe kwamanye amapulatifomu. Uma ufuna ukuyihlola, khumbula ukuthi amathokheni abiza u- $ 5.99 ukubhekela imali yesitolo sohlelo lokusebenza lweselula, kanti kwideskithophu ukubhaliswa kweTwitch kubiza u- $ 4.99.
Ukuze uqale ukusebenzisa i-iOS, kuzomele uvuselele enguqulweni yakamuva yeTwitch bese uqhafaza esikrinini sevidiyo ukwenza inkinobho yokubhalisela ivele. Kuyo yonke inyanga ka-Okthoba, abasebenzisi be-iOS bangathenga ama-Sub Sub Tokens ama- $ 8.99 kuphela.
pixel 4a t usuku lokukhishwa kweselula
s8 + vs inothi 5
umbhalo we-chrome kuya enkulumweni
Onke amadili amancane we-iPhone 12 nezintengo eVerizon, T-Mobile, AT & T, Best Buy, noma evuliwe
IMetroPCS manje seyiMetro yiT-Mobile; ingeza i-Amazon Prime neGoogle One ezinhlelweni zedatha
Kungani i-Apple ikhiphe intengo ye-iPhone SE ka-2020 'isuka ku- $ 229'? Kuningi ongakuthanda nokuningi ongakusebenzisa ku ...
Amafoni ane-Flappy Bird afakiwe manje ayizinto zokunethezeka ku-eBay
I-iPhone 8 vs iPhone 7 / 7Plus, i-Galaxy S8 / S8 +, i-LG G6, i-Google Pixel: ukuqhathanisa usayizi
Ungathola kanjani ukuthi ngabe i-Apple iPhone 6s yakho ikufanele yini ukushintshwa ibhethri lamahhala
Yimaphi ama-iPhones azothola i-iOS 15?
Intengo yefoni yeRazer nosuku lokukhishwa
5 amacala amakhulu ebhethri onqenqemeni lwe-Samsung Galaxy S7
16 Best FPS / TPS (owokuqala nowesithathu umuntu wokudubula) imidlalo ye-Android, i-iPhone ne-iPad